Caffeen Oromiyaa mootummaa haaraa hundeesse
-Yaa'iin hundeeffamaa Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataas Wiixata taa'ama
Finfinnee: Yaa’iin hundeeffamaa Caffee Oromiyaa marsaa 5fa, bara hojii 1fa kaleessarraa eegalee guyyoota sadiif Adaamaa, Galma Caffeetti adeemsifamaa jiru mootummaa haaraa hundeesse.
Caffichi oolmaasaa kaleessaatiin Obbo Muktaar Kadir pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa taa'anii akka ittifufaniif kan muude yoo ta'u, muudama Pirezidaantii Ittaanaa dabalatee kan miseensota kaabinee naannichaa Obbo Muktaariin dhiyaates sagalee guutuun ragga'eera. Kana malees caffichi muudama miseensota gumii calaltuu heeraa namoota sagal of keessaa qabuu, dura taa’ota koreelee dhaabbii saddeetiifi boordii Dhaabbata Raadiyoofi Televizhinii Oromiyaa mirkaneessuusaa gabaasa Televizhiniin Oromiyaa tamsaaserraa hubachuun danda'ameera.
Abbaan Adeemsa Hojii Ijoo Dhimmoota Kominikeeshinii Waajjira Caffee Oromiyaa, Obbo Daksiisoo Huseen yaa’ii hundeeffamichaa ilaalchisuun ibsa Gaazexaa Bariisaatiif dheengadda kennaniin akka jedhanitti, yaa’ichi Fulbaana 20-22 bara 2008tti kan adeemsifamu yoo ta'u dhimmoota adda addaarratti marii'achuun KGT 2faas ni raggaasisa. Caffeen filannoo waliigalaa Caamsaa darbe geggeeffamerratti hundaa’uun mootummaa haaraa ijaare kun, KGT 2fa, wixineewwan labsii qaamolee raawwachiistuu keessa deebiin caasessuuf qophaa’eefi bulchiinsa magaalota Oromiyaa ilaallatanirratti gadifageenyaan mariyatee kan raggaasisu ta’uu himaniiru. Caffeen waggoota shanan dhufaniif hojiirra turu kun namoota 31 kanneen Mana Marii Federeeshiniitti naannicha bakka bu’uun miseensummaan tajaajilan akka filatus Obbo Daksiisoon ibsaniiru.
Miseensota 537 Caffeen Oromiyaa qabu keessaa dhibbeentaan 47 dubartoota ta’uu eeranii, kunis kan marsaa darbee harka 22n akka caalu addeessaniiru. Miseensota Caffee marsaa 5fa kanarraa bulchiinsa gaarii mirkaneessuu, sassaabdummaa kiraa dhabamsiisuufi dagaagina sirna dimokraasiirratti ciminaafi kutattummaan hojjechuun kanirraa eegamu ta’uus beeksisaniiru. Gama biraatiin yaa'iin hundeeffamaa Mana Marii Bakka Bu'oota Ummataa marsaa 5fa, bara hojii 1fa Fulbaana 24 bara 2008 taa'amee mootummaa haaraa ni ijaara jedhamee eegama. Yaa'icha bakka miseensonni Manneen Marii Bakka Bu'oota Ummataafi Federeeshinii argamanitti haasawaa baniinsaa pirezidaantiin RFDI, Dr. Mulaatuu Tashoomaa taasisaniin banama.
Torban kana/This_Week 43934
Guyyaa mara/All_Days 1635729